Imoto Car Cushion Factory, abahlinzeki - China Car Seat Cushion Abakhiqizi
Ukufakwa Easy Universal Auto Isikhumba Seat Protec ...
Luhlala Isikhathi Eside futhi Avikelayo TPE Car Foot Mats nge Black ...
Amaphethini ahlukahlukene we-Car Floor Mats Mats Raw Material
Indwangu Yangaphakathi Yendwangu Yemoto Yakwa-Black Faux Suede
Izithuthi Microfiber Zokwenziwa Isikhumba Ngo Peanut Bu ...
Umkhiqizi China Suede Ukuzwa Solvent-Free Mic ...
High Quality Auto Microfiber Isikhumba nge Competitiv ...
Eco-friendly Izithuthi Microfiber Isikhumba Car M ...
Umhlinzeki Wemibala Yesikhumba Esihlanzekile Yemibala yiChina Factory
Ikhava yesihlalo semoto iyingxenye ebaluleke kakhulu yengaphakathi lemoto, ikhava yesihlalo semoto entofontofo izothuthukisa injabulo yomnikazi ngesikhathi sokushayela. Uma udinga sicela usazise imodeli futhi sizokunikeza imininingwane eyengeziwe.
Hot Sale Okugcwele Setha Uhlobo Universal Isikhumba Car Seat Cushion nge Car
Isitayela sokwakheka ngokuhambisana nokwakheka komzimba womuntu esihlalweni semoto kungakudambisa ngempumelelo ukukhathala okubangelwa ukushayela.
Upholstery Yemoto Seat Mbumbulu Lesikhumba Car Seat Cushion
Njengenye yezinto ezibalulekile ngaphakathi kwezimoto, isihlalo semoto sinendima ebalulekile emiphumeleni yengaphakathi lemoto.
Izesekeli Zangaphakathi Ezihlala Isikhathi Eside Izihlalo Zezimoto
Ngokuhlanganiswa kombala okusha kanye nezitayela ezahlukahlukene, izihlalo zemoto zeBensen zingahlangabezana nezidingo zakho eziningi.
Izesekeli Zokuzenzakalela Zokuhlobisa Imoto Isihlalo seCushion Universal
Isikhumba esingezansi sikhishwe futhi sakhiwe ngomdwebo, okuthuthukisa kakhulu ukuphefumula kwesikhumba, amanzi omswakama kanye nomoya omncane, i-anti-slip nokuqina okumelana nayo, futhi ngokushesha uhlangabezana nemoto yokuqala yokungenisa umoya kagesi, ukufudumeza neminye imisebenzi.
Imibala Ehlukene Isikhumba Isihlalo Somvikeli Wesihlalo Esivikelayo
I-Bensen car cushion isebenzisa inqubo yendabuko yokuhlobisa, iveza isithombe esinezinhlangothi ezintathu ezinhle kakhulu, kunemibala eyisishiyagalolunye yakudala enemfashini, elula futhi eguquguqukayo.
Imoto Yangaphakathi Yendwangu Yokushintshwa Kwendwangu Yesikhumba Indwangu Yemoto Yesikhumba
Amakhushini ezimoto zakwaBensen asebenzisa isikhumba se-PU esinobungani bemvelo, ngendwangu yelineni yelineni elibi kakhulu yaseYurophu, ukumunca umswakama nokuphefumula, izinkathi ezine zokushisa okungaguquguquki, kukhulisa injabulo yakho lapho ushayela.
Ikhwalithi ephezulu eyenziwe ngokwezifiso ethengisa kakhulu ehlala isikhathi eside isihlalo se-Auto
Ama-cushion ezimoto zakwaBensen adla ifa lamasu wesikhumba aklanywe ngesandla, ahlanganiswe nomklamo wesimanje wobuhle bemfashini ukukhombisa ukuthungwa okuhle nokucocekile kwe-premium.
I-Car Seat Cushion kanokusho enentengo yokuncintisana
Ubukhulu besigodlo sesihlalo bungu-1.8mm kuphela, buqinile isihlalo sangempela, sithambile futhi sikhululekile, akulula ukusonteka. Ukusetshenziswa jikelele kwezinhlobo eziningi zezimoto.
Umkhiqizi Wesihlalo Esiphezulu seCar Seat Car
Izembozo zezihlalo zemoto yizimpahla zomthengi eziyinhloko zabanikazi bezimoto. Khetha isiguqo semoto esikahle, esisebenzayo ngokuya ngesizini kubaluleke kakhulu. Manje kukhona isikhumba, isikhumba esikhulu kakhulu, isikhumba sokufakelwa, inayiloni, i-fiber yamakhemikhali, uboya bokufakelwa, uvolo we-polyester nezinye izinto ezihlukile zezembozo zezihlalo zemoto